Hevitry ny mpamaham-bolongana momba ny fampahafantarana ny VIH/SIDA any amin’ny Tontolo Arabo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Aogositra 2009 8:24 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, srpski, 简体中文, 繁體中文, বাংলা, polski, عربي, English
Fady any amin'ny ankamaroan'ny faritra Arabo ny miresaka ny momba ny VIH/SIDA, na dia misy aza ny fandaharan'asan'ny PNUD na sampandraharahan'ny Firenena Mikambana misahana ny fampandrosoana tahaka ny HARPAS izay miezaka ny mampahafantara ny momba azy ity. Raha mitatitra ny tsy fahafantarana ny momba ny VIH/SIDA ny mamaham-bolongana sasany, dia gaga amin'ny halakin'ny fiezahana hanalana ny holatry ny aretina kosa ny hafa.
Mpanolo-tena ao amin'ny Peace Corps i Duncan ary miasa ao amina foto-drafitr'asa iray misahana ny rano ao Maraoka, ary dia nanoratra ny eritreriny vitsivitsy ny fihetsika hitany manoloana ny VIH/SIDA hitany any ambanivohitra iasany izy. Inoany fa na dia ambany aza ny tahan'ny olona tratran'ny VIH any Maraoka, dia tandindonin'ny mety hipariahan'ny VIH/SIDA ihany ny firenena amin'ny ankapobeny:
Maro ny toe-javatra mametraka fa mety hiely vetivety ny aretina.
Voalohany ny tsy fahalalana ny fisian'ny aretina. Tsy mahalala ny olona amin'ny ankapobeny hoe inona izany. Raha mba nisy nandre ihany dia tsy fantany tsara ary mety mbola zavatra diso koa aza no ahafantarany azy. Tsy fantany ny fomba fifindrany. Miteny ny olona fa mifindra amin'ny alalan'ny findramana borosinify ny aretina, na fandehanana any amin'ny hammam (trano fandroana andoavam-bola), ka mifoka azy ao. Tsy naheno mihitsy aho hoe amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo ny fomba fifindrany.
Faharoa ny kolontsaina manakana ny firesahana azy an- kitsim- po. Fiaraha-monina tena mpivavaka ny aty ka zava-dehibe eo amin'ny fiaraha-monina izany miseho ho madio (masina) izany. Hany ka tena sarotra dia sarotra ny miresaka lohahevitra lehibe tahaka ny fampiasana fimailo.
Fahatelo (tahaka ny mifanohitra amin'ny eo aloha) dia ny fielezan'ny fivarota-tena manerana ny firenena. Mitranga indrindra izany etoamin'ny faritany misy ahy, Khenifra, izay malaza indrindra amin'ny fivarota-tena. Reko fa eto amin'ity faritany ity no misy ny tanàna telo amin'ny efatra anjakan'izany fivarota-tena izany. Misy ivotoerana iray tena akaiky ahy indrindra ary fantatro fa mpandeha amin'ny mpivaro-tena ao ny lehilahy amin'ny tanàna misy ahy. Efa nolazain-dry zareo tamiko izany. Miaraka amin'izany olana izany ny fahafantarana fa avy any ivelan'ny tanàna ny maro amin'ireo mpivaro-tena ireo. Heveriko fa toerana mora ielezan'ny aretina indrindra ny toerana tahaka itony.
Raha fehezina dia lohahevitra mahamenatra ny olona ny miresaka azy ity ary dia tsy misy mahalala na inona na inona momba azy ny olona.
Vakio ny fihetsika hafa ataon'ny Maraokana manoloana ny VIH/SIDA ato amin'ity lahatsoratra ity.
Nanaraka atrik'asa iray tany Le Caire ny mpamaham-bolongana Bahrainita Suad tamin'ny herintaona hampahalalana bebe kokoa ny momba ny SIDA, ary dia nosoratany avy eo ny tantaran'i Aisha, vehivavy Sodaney tratran'ny tsmok'aretina tamin'ny alalan'ny famindrana ra. Notantarain'i Aisha ny namparary azy sy ny nahafantarany tamin'ny farany izay nitranga:
Nihena ny lanjako tao anatin'ny volana vitsivitsy ary miaraka hatrany amin'ny fandoavana, harerahana, tazo, ary tsy fahitana tory izany. Nentina tany amin'ny laboratoara aho indray mandeha hitsirihana ny rako ary dia voahidy lasira mena ny valopy nisy ny valiny avy any. Nolazain'ny dokotera ny marina momba ny aretiko, fa tsy niresaka tamiko io zavatra io ny vadiko; ny hany nolazainy tamiko dia hoe mitovitovy amin'ny tosi-drà na diabeta ny aretina mahazo ahy ary dia tsy afaka miaraka manao firaisam-batana intsony izahay.
Avy eo dia nentin'ny vadiko tany amin'ny dokotera hafa aho, izay nanokatra ny valopy teo anoloako ary nilaza fa mitondra ny SIDA aho. Ankona aho, tsy nanana fotoana akory hitomaniana tamin'izay nahazo ahy. Tratran'ny SIDA hoe aho?? Hatramin'ny oviana ary amin'ny fomba ahoana? Namaly ny dokotera hoe: “Anontanio ny tenanao. Tadidinao ve hoe inona no nataonao ka nifindran'ity aretina mahafaty ity taminao?” Manamarika ahy ho toy ny makorelina tsotra izao ilay dokotera nefa tsy mahalala na inona na inona momba ahy akory. Nilaza taminyaho fa vehivavy manambady ary tsy nanao firaisana ivelan'ny mariazy. Tamin'io fotoana io dia niditra tao amin'ny biraon'ny dokotera ny reniko sy ny vadiko, naneho ny hatezerany tamin'ny vadiko avy hatrany ilay dokotera, niampanga azy ho namindra ny aretina tamiko. Tezitra aok'izany tamin'ny vadiko aho, ary nanomboka nanositosika sy nikapokapoka ny vadiko koa sady nitabataba taminy. Niezaka ny niaro tena izy saingy tsy nohenoiko mihitsy. Nikapokapoka malefaka ny hatoko ny reniko nandritra izany fotoana izany. Nanomboka tamin'io fotoana io dia nihanangatsiaka ny fifandraisan'ny havako sy ny olom-pantatro tamin'ny vadiko; voahendrikendrika ny vadiko mandra-pivalian'ny fitsirihana mampiseho fa tsy mitondra ny aretina ny vadiko sy ny zanako. Niala tsiny tamin'ny vadiko aho ary fantatro fa tamin'ny alalan'ny famindrana ra natao tamiko tany amin'ny hopitaly no nahazoako ny aretina.
Nametraka ny VIH/SIDA ho ao anatin'ny fandaharam- pampandrosoana ny fireneny i Yemen, saigy hitan'i Omar Barsawad tamin'ny herintaona fa maro ny zavatra mbola tokony atao:
Na dia lasa aloha ihany miohatra amin'ny firenena Arabo manodidina azy aza i Yemen amin'ny ady amin'ny VIH/SIDA, dia mbola lavitra ny lalana amin'ny fametrahana foto-drafitr'asa sy ny fahazoana fanafody taka-bidy vetivety ho an'ny marariny. Efa vonona any amin'ny laboratoara sy hopitaly lehibe ny fitsirihana ny VIH/SIDA. Saingy raha hita fa miabo ny vokatra dia manomboka ny olana; eo no manomboka ho tena sarotra ny raharaha ho an'izay tratrany. Tsy maintsy mandeha mankany Sana'a renivohitr'i Yemen ny olona mitondra ny VIH/SIDA mba hitsirihana ny isan'ny sela CD4 sy ny tahan'ny poizin’ areti- mifindra; Rehefa vita avokoa izany fitsapana rehetra izany vao tsaboina sy omena fanafody araka ny tokony ho izy ny marary. […] Eo amin'ny resaka fanafody itsaboana ny VIH/SIDA ihany koa dia tsy maintsy mandeha mankany Sana'a (isan-telovolana na mihoatra) ny marary fa tsy misy any amin'ny toeram-pivarotana sy ny toera-pitsaboana Yemenita hafa. Dia efa azonao eritreretina amin'izany ny fahasahiranana azo ankoatra ny hareraha-tsaina efa mianjady amin'ny mararin'ny VIH/SIDA sy ny manodidina azy. Efa vola be no lany amin'ny fandehanana mankany Sana'a sy ny sakafo lany mbamin'ny fandaniana hafa. […] Na dia efa mahafantatra kokoa ny momba ny VIH/SIDA aza ny olona raha oharina ny tamin'ny roa na telo taona lasa dia mbola tsy hainy ny momba ny aretina; ary maro ny olona mbola mihevitra fa henatra sy mahafa-baraka izany mitondra VIH/SIDA izany.
Na izany aza dia hita kosa ny dingana hanalana ny tahotra tafahoatra ny aretina any amin'ny firenena sasany ao amin'ny faritra. Nanao ny fitsirihana VIH voalohany tao amin'ny Laboratoaran'ny governemanta i The Egypt Guy :
Nahagaga ahy fa nahafinaritra ny fomba fandraisan'ny dokotera nialoha ny fitsirihana. Hitako fa tsy nanontaniana ny anarako aho fa tamn'ny solon'anarako sy ny daty nahaterahako ho famantarana ahy tao. Avy eo aho dia nampandalovina tao amin'ny mpanolo-tsaina iray izay mampahafantatra tsotsotra ny momba ny SIDA sy ny VIH no asany. Zendana aho fa tsy nampiseho tsy fanajana ahy mihitsy rangahy io rehefa fantany fa hitsirika ny fisiana na tsia VIH amiko aho. Henoko manko fa hatramin'ny vao haingana dia resa-pady na dia amin'ny dokotera aza izany SIDA izany. Taorian'ny fifanakalozan-kevitra dia nanome fimailo sy fandamalama ahy izy ary bokikely telo miresaka ny momba ny SIDA, ary dia nanao fitsirihana aho avy teo. Ho henoko amin'ny alahady izao ny valin'ny fitsirihana, izay inoako fa hiiba, Irario soa aloha aho e!! 🙂
Oadray, tsy mandoa na dia ariary aza hay izaho amin'izany rehetra izany.
Tsy nampoiziko raha ny laboratoaran'ny governemanta no nanao izany, ary faly aho fa manana fomba fijery malalaka kokoa momba ny resaka fifidran'aretina amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo ny fireneko ary miezaka dia miezaka hahalefy ny henatra mifandraika amin'ireny aretina ireny, indrindra fa amin'ny resaka VIH sy SIDA.
Azonao vakiana eto ny fandraisana andraikitry ny mpamaham-bolongana Ejipsiana hanalana ny takaitran'ny (tahotra tafahoatra) VIH/SIDA.